Saameynta ay Baraha Bulshadu ku leedahay Khibradda Macaamiisha | Martech Zone
Markii ganacsatadu markii ugu horraysay ku soo biirtay adduunka warbaahinta bulshada, waxaa loo adeegsaday madal lagu suuqgeeyo wax soo saarkooda laguna kordhiyo iibka. Si kastaba ha noqotee, dhowrkii sano ee la soo dhaafay, si kastaba ha noqotee, warbaahinta bulshada ayaa ku dhex milmay barta loogu jecel yahay bulshada internetka - meel ay kula falgalaan astaamaha ay jecel yihiin, iyo tan ka sii muhiimsan, caawimaad raadso markay arrimaha leeyihiin.
Macaamiisha in ka badan abid waxay raadinayaan inay kula xiriiraan noocyada warbaahinta bulshada, shirkaddaaduna ma awoodo inay la tartanto haddii aadan ka mid noqon. Wax kasta oo is dhexgal ah, iyo iska indha tirka macaamiisha si fudud ikhtiyaar uma ahan - sidaas oo kale waxay yeelan doontaa saameyn taban ku leh khibrada macaamiisha, oo markaa, waxay dhaawacdaa khadkaaga hoose.
Kanaal La Jecel Yahay
Ma ogtahay sababta ay macaamiisha aad ugu jecel yihiin warbaahinta bulshada? Waxay siinaysaa iyaga awood ay ku weydiiyaan su'aalo isla markaana uga baxaan ra'yi-celin fagaare ah halkaasoo jawaabtaadu ku jirto oo la soo bandhigo si qof walba uu u arko - oo i aamin, macaamiisha kale si dhow ayey isha ugu hayaan A ka barto isweydaarsiga bulshada waxay ogaadeen in 88% macaamiisha ay u badantahay inay wax ka iibsadaan astaan ​​leh cabashooyinka macaamiisha ee aan jawaabahooda laga helin baraha bulshada. Asal ahaan, sida aad ula macaamisho macaamiishaada waxaa tixgelinaya kuwa wax iibsan kara.
Macaamiisha maanta waxay caadeysteen inay helaan jawaabo deg deg ah. Markay macaamiisha su'aalo ku weydiiyaan baraha bulshada, waxay kaa filayaan inaad si dhaqso leh ugu laabanaysid iyaga oo xallinaya Dhab ahaan, 42% macaamiisha ayaa filaya jawaab saacad gudahood, iyadoo 32% dheeraad ah ay rajeynayaan waqtigaas inuu noqdo 30 daqiiqo gudahood. Si fudud haddii loo dhigo, waa inaad farahaaga ku garaacdaa garaacista marwalba adoo si joogto ah u kormeeraya xisaabaadka warbaahinta bulshada si aad u aragto faallooyinka iyo su'aalaha markay soo galayaan.
Haddii aad ku aragto sumaddaada dhibaatada warbaahinta bulshada dhexdeeda, waxaad u baahan tahay inaad iska lahaato arrinta laga hadlayo isla markaana aad xal u hesho si dhakhso leh. Haddii adiga (ama shaqaalahaaga) aadan xal degdeg ah bixin karin, hubi macaamilka inaad ka shaqeyneyso oo dabagal ku samee sida ugu dhakhsaha badan ee aad jawaab u hesho. Waxa ugu dambeeya ee aad dooneysid inaad sameyso ayaa ah inaad caqabad ku noqoto dulqaadka macaamiishaada adigoo dib u dhigaya ama iska indha tiraya gebi ahaanba - taas oo leh cawaaqib xumo.
Maalmaha ka horeeya warbaahinta bulshada, macaamiisha ayaa laga yaabaa inay la wadaagaan khibrado iibsi aan fiicnayn dhowr xubnood oo qoyska ka mid ah, saaxiibbada dhow, iyo dadka ay wada shaqeeyaan. Shirkadaha, tani waxay ahayd lambar la maareyn karo oo wax laga qabanayo. Si kastaba ha noqotee, markii ay soo ifbaxayaan Facebook iyo Twitter, macaamiisha xanaaqsan waxay leeyihiin tiro umuuqda kuwa aan xad lahayn oo dad ah si ay ugulaabtaan sheekooyinka macaamiisha horridda ah iyo alaabada baaluqsan.
Tirakoobyada ku xeeran dhacdadan cusubi maaha wax lagu hindhiso:
45% macaamiisha ayaa kula wadaaga khibradaha xun ee adeegga macaamiisha warbaahinta bulshada (Daraasad Cabbir ah )
71% macaamiisha khibrada u leh jawaab-celinta deg-degga ah ee wax ku oolka ah ee baraha bulshada waxay u badan tahay inay kula taliyaan astaantaas kuwa kale, marka la barbar dhigo keliya 19% macaamiisha aan helin jawaab. (NM kiciya)
88% dadku waxay aaminaan dib u eegista khadka tooska ah ee ay qoreen macaamiisha kale sida ay ugu kalsoon yihiin talooyinka ka imanaya xiriirada shaqsiyadeed. (BrightLocal)
Markay shirkaduhu wax ka qabtaan oo ay ka jawaabaan codsiyada adeegga macaamiisha ee ku saabsan warbaahinta bulshada, macaamiishaasi waxay ku dambeeyaan inay 20% ilaa 40% ka badan shirkadda la qaataan. (Bain & Shirkad)
85% taageerayaasha noocyada Facebook waxay kugula talinayaan noocyada kuwa kale (Isku duubni)
Macaamiisha ayaa u badan 71% inay wax iibsadaan iyagoo ku saleynaya gudbinta warbaahinta bulshada (Hubspot)
Macaamiishaadu waxay leeyihiin helitaan iyo saameyn ka badan sidii hore, waana danta shirkaddaada ugu fiican inaad ka dhigto mid faraxsan iyagoo kula macaamilaya baraha bulshada sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan.
Waxaad si weyn u wanaajin kartaa khibrada macaamiisha adoo ka qeyb qaadanaya dhismaha xiriirka kanaalkaaga warbaahinta bulshada. Macaamiishaadu badanaa waxay ku saleeyaan go'aammada iibsashada shucuur, halkii ay macquul ka noqon lahaayeen - mana jiraan wax beddeli kara isdhexgalka aadanaha ee horumarinta xiriir shucuur.
Waad kobcin kartaa xiriir shucuur leh oo waxaad ku guuleysan kartaa tartankaaga adoo hubinaya in macaamiishaadu ogaadaan in la arkay oo la qaddariyo.
Si dhakhso leh uga jawaab fariimahooda.
La xiriir oo u mahadnaq shakhsiyaadka markay faallo ka bixinayaan ama la wadaagayaan qoraaladaada.
Weydiiso jawaab celin.
U dir qoraal mahad-naq ah baraha bulshada markay wax iibsanayaan.
Sii qiimo dhimis ah waxyaabaha ay jecel yihiin.
Sida laga soo xigtay Force Force, Adkeynta khibrada macaamiisha waxay keeneysaa heerar qanacsanaanta sare iyo 2-12 jeer qiimeynno talobixin sare ah - oo labaduba saameyn weyn ku yeelan kara daacadnimada macaamiisha iyo dakhliga. Markaad si sax ah u isticmaasho warbaahinta bulshada, waxay shaki la'aan saameyn togan ku yeelan doontaa khibrada macaamiisha - yaa og, waxaad ku dambayn kartaa inaad u rogto macaamiisha faraxsan inay u doodaan sumadaha.
Tags: adeegga macaamiisha oo xunqadarindhalaalayaisweydaarsikhibrada macmiilkaAdeegga macaamiishataageero macaamiishacilmi cabbirdareenkashaqaalahahubspottaabashada aadanahahoyga isdhexgalkaxoognm kicingo'aanka iibsigagaaraanwarbaahinta bulshadanafta magactaageerozendesk
100 Sano Kadib: Boqortooyada Macaamilka
21, 2016 at 9: 55 AM
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee warbaahinta bulshada ee ganacsiga ayaa ah iyada oo loo adeegsanayo kordhinta taraafikada boggaaga. Kaliya maahan baraha bulshada inay kaa caawiyaan inaad dadka u tilmaamto websaydhkaaga, laakiin inta badan ee saamiyada warbaahinta bulshada ee aad hesho, ayaa sare u kici doona darajada raadintaadu.
21, 2016 at 1: 22 PM
Si aan toos ahayn, taasi waa run… laakiin Google waxay horay u sheegtay inaysan si toos ah uga faa'iideysan wadaagista bulshada si loo go'aamiyo darajada. Si aan toos ahayn, wadaagida waxyaabahaaga bulsho ahaan waxay badiyaa dad kale la wadaagaan oo ka hadlaan. Marka xiriiriyeyaasha ku habboon ay helaan jidkooda goobaha ku habboon, markaa waxay ka caawineysaa darajada.